भाइरल भिडियो : सलमान र ऐश्वर्याबीचको झगडा, के सम्म गर्थे सलमान, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भाइरल भिडियो : सलमान र ऐश्वर्याबीचको झगडा, के सम्म गर्थे सलमान
एजेन्सी। तनुश्री दत्ताले नाना पाटेकर र टेलिभिजन अभिनेत्रीले आलोक नाथ माथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएका छन्। मी टू क्याम्पियनमार्फत प्रत्येक दिन पहिलाहरुले विगतमा आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको कुरा लिएर आएका छन्।
यसैबीच बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्याले यौन दुव्र्यवहार बलिउडमा नयाँ नभएको बताएकी छन्। उनले महिलाले आफूमाथि भएका दुव्र्यवहारलाई महिलाले स्वतन्त्रपूर्वक राख्न पाउनु पनि राम्रो कुरा भएको बताइन्। महिलामाथि हुने गरेको यौन दुव्र्यवहारलाई समाजले गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको उनको भनाइ छ।
कुनै बेला ऐश्वर्याले पनि सलमान खानले आफूलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। यसैबीच सामाजिक संजालमा यतिबेला सलमान खानको पुरानो अन्तर्वाता भाइरल भएको छ। अन्तर्वातामा पत्रकाले सलमानलाई के तपाइँले कहिल्यै कुनै महिलामाथि हात उठाउनु भएको छ ? भनेर प्रश्न गरेकी छन्। जवाफमा सलमानले भनेका छन्–कुनै एक महिलाले त्यस्तो कुरा गरिन् भनेर त्यही कुरालाई विश्वास गर्नु हुँदैन।
पत्रकारले फेरि सोध्छिन् के तपाइँ यो विषयमा कुरा गर्न चाहनुहुन्न?
सलमानले जवाफ दिए–एक पटक एक पत्रकारले मसँग यही प्रश्न सोधका थिए। यो सुनेर मेले जोडले टेबलमा हातले हानेको थिएँ। पत्रकार छक्क परे। टेवल करिव करिव भाँचियो। ’
ऐश्वर्या रायले सलमान खानमाथि २००२ मा रिलेशनशिपका क्रममा आफूमाथि हात उठाएको आरोप लगाएकी थिइन्। एक संचारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वातामा ऐश्वर्याले भनेकी थिइन्–सलमान हामीबीच भएको ब्रेकअपलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन्। उनी फोनमा मलाइ लगातार नचाहिने कुरा सुनाइ रहन्थे। सलमान सधैं ममाथि शंका गर्थे। उनलाई मेरो को–स्टारसँग मेरो अफेयर भएको जस्तो लाग्थ्यो। अभिषेक बच्चनदेखि शाहरुख खानसम्म मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो।’
अन्तवार्ताका क्रममा ऐश्वर्याले अगाडि भनिन्– एक समय यस्तो पनि आयो की सलमानले मलाई हात उठाउन समेत थाले। म भाग्यमानी थिएँ किनभने मेरो शरीरमा कुनै निसाना थिएन। यस्तो हुँदा पनि म विहानै काममा जान्थेँ र मलाइ केही नभएको जस्तो गरी काम गर्थेँ।’
ऐश्वर्याले भनेकी छन्–म सलमानको मदिरा सेवन गर्ने बानी र त्यसपछि गरिने अभद्र व्यवहारबाट म वाक्क थिएँ। उनी मसँग हात हालाहाल र मानसिक रुपमा दुव्र्यवहार गर्थे। कहिले काँही त उसले मेरो आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने अभिव्यक्ति पनि दिन्थे। कुनै पनि स्वविवेकी महिला यस्तो व्यवहार सहन गर्न सक्दिनन्। यही कारण मैले सलमानसँगको सम्बन्ध अन्त्य गरेकी हुँ।’
सलमान र ऐश्वर्याले पहिलो पटक फिल्म ‘हम दिल दे चुके समन’ (१९९९) सँगै काम गरेका थिए। र यही फिल्मको सेटबाट उनीहरुको अफेयर सुरु भएको थियो। एक दुई वर्षसम्म त सम्बन्ध राम्रै थियो र सलमानको व्यवहारका कारण उनीहरुबीच ब्रेकअप भयो। सलमान कयौं पटक आधिरातमा ऐश्वर्याको घर पुगेर उनको ढोका ढकढक्याउँथे।
एक पटक त सलमान खान राति ऐश्वर्याको घर पुगेर उनको ढोकामा लात्ति हान्न थाले। उनले हातले पनि ढोकामा प्रहार गरे। जसका कारण उनको हातमा चोटसमेत लागेको थियो। उनी राति तीन बजेसम्म ढोकामा हातले हानि रहे। सलमानले रिसमा ऐश्वर्याको घरबाट हाम फाल्ने धम्की पनि दिएका थिए।
सलमानले ऐश्वर्याले आफूसँग विवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भन्दै यस्तो व्यवहार गर्थे। पछि एक अन्तवार्तामा सलमानले भनेका छन्–म कुनै पनि अवस्थामा ऐश्वर्यालाई गुमाउन चाहन्न थिएँ। त्यही कारण मैले यस्तो व्यवहार गरेको हुँ।’